Iyo Yakakwira Mutengo weWebhu Dhizaini Kukundikana ndeye Zvakajairika | Martech Zone
Iyo Yakakwira Mutengo weWebhu Dhizaini Kukundikana ndeye Zvakajairika
Muvhuro, July 6, 2015 China, July 9, 2015 Douglas Karr
Paunoverenga aya maviri manhamba, iwe unozoshamisika. Kupfuurisa 45% emabhizinesi ese haana webhusaiti. Uye yeiyo DIY's (Do-It-Yourselfers) iyo inotanga kuvaka saiti, 98% yavo inotadza kutsikisa imwe zvachose. Izvi hazvitomboverenga huwandu hwemabhizinesi ane webhusaiti ayo asiri kungotyaira anotungamira… ayo ini ndinotenda ndeimwe akakosha muzana.
ichi infographic kubva Webydo inonongedza nyaya hombe nekutadza kwewebhu dhizaini uye kuomarara kwemhinduro uye kudiwa kwechiyero pakati peimwe dhizaini uye yakawanda yekuvandudza. Wedzera kune iyo nhamba yevanofarira uye nematurusi asina simba avanogona, uye inotsanangurira njodzi yenhamba yepamusoro yemabhizinesi.
Pakati pe DIY mhinduro uye B2B zvemukati zvekushambadzira mapuratifomu, chikamu chechitatu chiri kubuda, chiri kutarisira kukanganisa webhusaiti dhizaini musika. Webydo inozvimiririra B2B mhinduro yevanogadzira hunyanzvi vanoshuvira kuumba epamberi mawebhusaiti evatengi vavo, ane tsika dzakagadzirirwa dhizaini uye vasina kunyora nyangwe imwe tambo yekodhi kana kuhaya vanogadzira.
Ini handina kushandisa Webydo asi ndinotarisira kuitora iyo yekuyedza-drive. Zvichida dambudziko rangu nderekuti ini ndiri wemugadziri kupfuura dhizaina. Ini ndinowanzo tora kurudziro kubva kune vamwe vanhu dhizaini uye ndozoisa iwo muwebhu yedu kuvapo. Ndiri kufara mukuenderera mberi kwekuvandudza muindasitiri, zvakadaro, uye kugona kwavo kuvaka mhinduro dzinochinja ne gadzirisa munzvimbo uye Dragora uye udonese zvigone.
Ini ndichave akatendeseka kuti ini handina basa nekushandisa mari mukuvandudza. Muchokwadi, isu tinowanzo shanda kuseri kwezvakanaka vagadziri kuti vavake nekukurumidza uye nekuchinjika kuita nekugadzira kwavo. Mapeji maviri anogona kutaridzika akafanana, asi iyo yepasi peiyo magadzirirwo uye kukodha inogona kuita mutsauko wakakura mukumhanyisa peji uye maitiro evatengi.
Ini handitende kuti dambudziko hombe rakatarisana newebhu dhizaini indasitiri maturusi, ndinotenda ndiyo kukosha kwebasa. Makore mazhinji apfuura, ndakaona mutauri akataura pamusoro pekambani yakashandisa mazana ezviuru zvemadhora kugadzira kambani yavo, asi yakamanikana kushandisa chikamu cheiyo pawebhusaiti yavo. Yako webhusaiti ndiyo yako yekutandarira pasi. Iwe hauna wechipiri kufunga nezve iyo ROI yemubhedha mune yako yekutandarira, asi iwe uri nickel uye kudzikisira yako webhu dhizaini uye yekuvandudza kambani. Izvo chete hazvina musoro.
Isu takaona pekutanga ruoko kunyanyisa. Takashanda nemakambani aive neimba yekumba, DIY saiti isina kuwana traffic uye isina inotungamira… ichidhurira kambani mazana ezviuru kana kunyange mamirioni emadhora mubhizinesi. Uye isu takaona mamwe makambani achivhuvhuta bhajeti yavo pane yakanaka dhizaini iyo yakanga isina zano rekuwana tarisiro, kuchengetedza vatengi, uye kuvasimudzira.
Yakawanda yemari yedu haina kushandiswa mukuvandudza nzvimbo dzevatengi vedu. Kazhinji kazhinji pane kusiri kushanda kune ongorora maitiro atingaite kuvandudza yavo yemusika mugove uye kutyaira akawanda bhizinesi kune yavo yepazasi mutsara. Ndiyo mari yashandiswa zvakanaka! Isu tinovaka akanaka masayiti evatengi pane chidimbu chemutengo uye nguva yemazhinji ma agency ... mutsauko ndewekuti kwedu chaiko kunogadzira mari!
Kana iwe uri web designer, tarisa Webydo! Zvinonzwika sekufambira mberi kunonakidza kweindasitiri iyi.
Tags: mawebhusaiti eamateurb2b vagadzirib2b vagadzirib2c webhu dhizainicmsyekugadzira webhu dhizainivagadziri vachipesana nevagadziridotnetnukedrupaljimdoJoomlaMagentooscommercenyanzvi vagadzirinyanzvi vanogadzirasquarespaceubracoweb Designwebhu dhizaini bhajetiwebhu dhizaini indasitiriwebhu dhizaini dhizainiwebhuwebhusaiti bhajetiWebsiteswebydoweeblywixWordPressyawl
Iyo Yakazara B2B Kushambadzira Nongedzo kuSlideshare
Jul 7, 2015 na3:17 PM
Zvinonakidza chaizvo. Wanga uchifunga pamusoro peizvi zvakanyanya asi kubva pakuona kwe 'unobatsira sei SMB isina unsophisticated kuvandudza ROI yekushambadzira kwavo?' Ungada chaizvo mhinduro yako pane ino ichangoburwa blog post.